တံတားနီနေ့ | ထွေထွေထူးထူး ကိုရွှေထူး
မတ်လ (၁၆) ရက်နေ့ ကို တံတားနီနေ့ လို့သမိုင်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ရတာကတော့ – ၁၉၈၈ ခုနှစ် မတ်လ (၁၆) ရက်နေ့ မှာ အာဏာရူးတွေရဲ့လက်ပါးစေသေနတ်ကိုင်သမားတွေဖြစ်တဲ့ လုံထိန်းလို့ ခေါ်တဲ့ လုံခြုံမှုထိန်းသိမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ ဝင်တွေကြောင့် ကျောင်းသားတွေ သွေးမြေကျခဲ့ရတဲ့ နေ့ တစ်ရက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နယ်မြေ အင်းလျားကန်စောင်းပေါ်မှာ ကျခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့သွေးတွေကြောင့် အင်းလျားကန်မြေမှာ သွေးလွှမ်းခဲ့ရသလို အင်းလျားကန်စောင်းပေါ်က အဖြူရောင် တံတားဖြူလည်း အနီရောင်ပြောင်းခဲ့ရတဲ့အတွက် ဒီနေ့ ကို ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုသမိုင်းမှာ တံတားနီနေ့ ရယ်လို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အာဏာရူး နေ၀င်းရဲ့ လက်ထက် ၁၉၆၂ ခုနှစ်က ပြည်သူ့ အာဏာကို လက်နက်နဲ့အဓမ္မ စတင်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရာမှ စလို့၁၉၈၈ ခုနှစ် ရှစ်လေးလုံးပြည်သူ့ အရေးတော်ပုံကြီးနဲ့ယခုလက်ရှိ သန်းရွှေတို့မတရားအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့အသက်သွေးတွေ ဆုံရှုံးခဲ့ကြတာကို ဘယ်သောအခါမှ မေ့ပျောက်မှာ မဟုတ်သလို ကျောင်းသားစိတ်ဓါတ် ရှင်သန်နေသူတိုင်းကလည်း အာဏာရူးတွေကို ဘယ်သောအခါမှ ကမ္ဘာကြေမှာ မဟုတ်ပါဖူး။ ခေတ်အဆက်ဆက်တိုင်းမှာလည်း ကျောင်းသားစိတ်ဓါတ် ကျောင်းသားဝိညဉ်နဲ့ကျောင်းသားတို့ ရဲ့အာဏာရှင်ဆန့် ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ လက်ဆင့်ကမ်း ရှင်သန်ပေါ်ပေါက်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၃ဂ ရက်နေ့ မှာ စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ကိုဖုန်းမော် ကိုစိုးနိုင်တို့အာဏာရူးတွေရဲ့မတရားပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတာကို မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူအပေါင်းဟာ မတ်လ (၁၆) ရက်နေ့ မှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (ပင်မ) ကျောင်းဝန်းအတွင်းမှာ စုစည်းခဲ့ကြပြီး အာဏာရှင် မဆလ နေ၀င်းအစိုးရကို ပြင်းထန်စွာ ဆန့် ကျင်ဆန္ဒပြကြပါတယ်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (ပင်မ) ရဲ့ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမရှေ့တွင် အာဏာရှင်ဆန့် ကျင်ရေး ဟောပြောပွဲများ ပြုလုပ်ကြပြီး စာရွက်စာတမ်းများ ဖြန့်ဝေခဲ့ကြပါတယ်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝန်းအတွင်းရှိ ကျောင်းဆောင်များဖြစ်တဲ့ မန္တလေး၊ အမရ၊ တောင်ငူဆောင်တွေကို လှည့်လည်ချီတက် လူစုရင်း ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ ကျောင်းအတွင်းရှိ အဆောင်နေ ကျောင်းသားများ ပူးပေါင်းလာကြပြီး ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကျောင်းသားအုပ်ကြီး ဖြစ်သွားခဲ့ပြီး ဆက်လက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဆေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများလည်း စက်မှုတက္ကသိုလ်နဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများနဲ့ အတူ ပူးပေါင်း ပါဝင်လာခဲ့ကြပါတယ်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝန်းအတွင်း ဆန္ဒပြကြွေးကြော်နေရင်း ကျောင်းသားများထဲမှ အလှည်ကျ ဟောပြောသူ ကျောင်းသားတစ်ဦးက ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ရှိရာ အင်းစိန် ကြို့ ကုန်းဘက်ဆီသို့ ချီတက်ဆန္ဒပြကြဖို့လှုံ့ဆော်လိုက်ရာမှ ကျောင်းသားများအားလုံးက လက်သီးလက်မောင်းတန်းကာ တပြိုင်နက် ထောက်ခံခဲ့ကြပြီး ဆန္ဒပြကျောင်းသားများအားလုံး စုစည်းညီညွတ်စွာနဲ့ ညနေ (၃) နာရီမှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အဓိပတိလမ်းကနေ ကျောင်းပြင်ပသို့စတင်ထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝန်းအတွင်းက အဓိပတိလမ်းကနေ စတင်ထွက်ခွာလာတဲ့ ဆန္ဒပြကျောင်းသူကျောင်းသားများဟာ ထိပ်ဆုံးမှာ သမိုင်းဝင်ခွပ်ဒေါင်းအလံကြီးကို လွှင့်ထူပြီး ပြည်လမ်းဘက်ကို ဦးတည် ချီတက်ထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားထုကြီးတစ်ရပ်လုံး ဆန္ဒပြချီတက်လာကြတာကို မြင်တွေ့ ကြရတဲ့ ပြည်သူတွေက အားပေးခဲ့ကြတဲ့အပြင် အထက်တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်း နောင်တော် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့ အတူ ချီတက်ဆန္ဒပြမှုထဲ အားဖြည့်ဝင်ရောက် ချီတက်ဆန္ဒပြလာခဲ့ကြပါတယ်။ နေ၀င်း အာဏာရူးရဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအပေါ် မတရားဖိနှိပ်ချူပ်မှုတွေကို ခံစားနေကြရတဲ့၊ စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကိုဖုန်းမော်တို့ ကို သေနတ်နဲ့ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့မှုကို မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး နာကျည်းနေကြတဲ့ ကျောင်းသားထုကြီးဟာ ရဲဝန့် စွာနဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြကာ အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့် ကျင်တော်လှန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ညီညွတ်စွာ သံပြိုင်ကြွေးကြော်နေကြတဲ့ အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေး ကြွေးကြော်သံများဟာ မိုးထိတိုင်အောင် လွှမ်းမိုးနေခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ဆန္ဒပြ ကျောင်းသားထုကြီးဟာ ရန်ကုန် ပြည်လမ်းမအတိုင်း ဆက်လက်ချီတက်လာရာ အင်းလျားလမ်းနဲ့ ပြည်လမ်းထောင့် အင်းလျားကန် တံတားဖြူရှိရာ ကန်ဘောင်ကို ကျော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ရုတ်တရက် ရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ အင်းလျားကန် တံတားဖြူကန်ဘောင် အကျော်မှာ နေ၀င်း အာဏာရူးရဲ့လက်ပါးစေ စစ်ခွေးတွေဟာ သံဆူးကြိုးခွေများနဲ့ ပြည်လမ်းမကို ပိတ်ဆို့ ကာရံထားတာ တွေ့လိုက်ရလို့ဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာရူးလက်ပါးစေ စစ်ခွေးတွေဟာ အေးချမ်းစွာ ချီတက်ဆန္ဒပြလာတဲ့ ကျောင်းသားထုဘက်ကို လူသတ်သေနတ်များနဲ့ ချိန်ထားပြီး ဘရင်းကယ်ရီယာများကလည်း ကျောင်းသားတွေဆီကို မျက်နှာမူပြီး ချိန်ရွယ်ထားခဲ့ပါတယ်။
ပြည်လမ်းပေါ်မှာ ဒီလို ဆန္ဒပြချီတက်လာတဲ့ ကျောင်းသားထုကို အာဏာရူး လက်ပါးစေ စစ်ခွေးတွေက အရှေ့ ဘက်က လူသတ်လက်နက်များနဲ့ချိန်ရွယ်ထားနေစဉ်မှာ ကေက်ကျစ်စဉ်းလဲလွန်းလှတဲ့ အာဏာရူးလက်ပါးစေ လုံထိန်း (နေ၀င်းအာဏာရူးရဲ့လုံခြုံမှုထိန်းသိမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ ဝင်) တွေဟာ ဆန္ဒပြကျောင်းသားထုရဲ့နောက်ဘက်ကနေ ရုတ်တစ်ရက် သေနတ်များ ဒိုင်းများ တုတ်များနဲ့ ပိတ်ဆို့ ၀ိုင်းရံခဲ့ကြပါတယ်။ အရှေ့ဘက်မှာ အာဏာရူးလက်ပါးစေ စစ်ခွေးအုပ်စု၊ အနောက်ဘက်မှာလည်း အာဏာရူးလက်ပါးစေ လုံထိန်းလူသတ်ကောင်တွေ၊ ညာဘက်က အင်းလျားကန်ဘောင်၊ ဘယ်ဘက်မှာ လူနေအိမ်တွေရဲ့ကာရံထားသော ခြံစည်းရိုးများနဲ့ လေးဘက်လေးတန် ပိတ်မိနေပြီဖြစ်တဲ့ ဆန္ဒပြကျောင်းသားထုဟာ အာဏာရူးတွေရဲ့သတ်ကွင်းထဲကို ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီလို အာဏာရူးလက်ပါးစေ လူသတ်ကောင်တွေရဲ့ကောက်ကျစ်ယုတ်မာစွာနဲ့ပိတ်ဆို့ မှုအောက်မှာ ရောက်ရှိနေကြစဉ်မှာ လူမဆန်လွန်းတဲ့ အမိန့် ပေးသံနဲ့ အတူ နောက်ဘက်က လုံထိန်းကောင်တွေဟာ အေးချမ်းစွာဆန္ဒပြနေကြတဲ့ ကျောင်းသားထုကို လက်ကိုင်တုတ်များနဲ့အကြမ်းဘက်စွာ ၀င်ရိုက်ပါတော့တယ်။ ရက်စက်ရမ်းကားစွာ ရိုက်နေတဲ့ နံပါတ်တုတ်များနဲ့ ရိုက်သံဟာ ကျောင်းသားများ အော်ဟစ်ပြေးလွှားကြသံနဲ့ အတူ အတိုင်းသား ကြားနေခဲ့ရပါတယ်။ လက်နက်ဆိုလို့အပ်တိုတစ်ချောင်းတောင် မရှိတဲ့ ဆန္ဒပြ ကျောင်းသားများဟာ ခြေဦးတည့်ရာကို ထွက်ပြေးကြရပါတယ်။ အင်းလျားကန်ဘောင်ပေါ် တက်ပြေးကြခဲ့ရတယ်။ အချို့လည်း အင်းလျားကန်ထဲ ခုန်ဆင်းကြပြီး လွတ်မြောက်ရာလမ်းကို ရှာခဲ့ကြရတယ်။ သွေးဆာနေတဲ့ လူသတ်ကောင် လုံထိန်းများဟာ မပြေးနိုင်သော ကျောင်းသူများကို ပိုမဲပြီး ရိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဆန္ဒပြကျောင်းသူကျောင်းသားများဟာ သွေးအလိမ်းလိမ်းနဲ့ ပြည်လမ်းမပေါ်မှာ အတုန်းအရုံး လဲကျကုန်ကြခဲ့ရတယ်။ နီးစပ်ရာ အိမ်ခြံတံခါးများကို ကျော်ဝင်ပြီး ပြေးပုန်းကြရသူတွေဟာ အနည်းစု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အင်းလျားကန်ဘောင်ပေါ် တက်ပြေးကြတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနောက်ကို လူသတ်ကောင် လုံထိန်းတွေဟာ အတင်းအဓမ္မ လိုက်ရိုက်ပြီး မပြေးနိုင်သူ ဖမ်းမိသူ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေများကိုလည်း အင်းလျားကန်ထဲ မောင်းသွင်းပြီး ခေါင်းကို ရေနှစ်သတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အင်းလျားကန် ရေပြင်လည်း သွေးချင်းချင်းနီလို့ အင်းလျားကန်ရဲ့ တံတားဖြူ ကန်ဘောင်လည်း ကျောင်းသားကျောင်းသူတို့ ရဲ့ သွေးတွေနဲ့နီနီရဲကာ တံတားနီအဖြစ်ကို ကြေကွဲစွာ ရောက်ရှိခဲ့ရပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်မှယ အသင့်စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြတဲ့ လုံထိန်း အချူပ်ကားများ မောင်းဝင်လာပြီး ပြည်လမ်းပေါ်တစ်လျှောက် ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်နဲ့လဲကျနေသူ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ၊ သေဆုံးသွားရတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ၊ မသေမရှင်နဲ့ညီဒညူအော်ဟစ်နေကြတဲ့ကျောင်းသူးကျောင်းသားတွေ၊ ဖမ်းဆီးမိတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို အချူပ်ကားတွေပေါ်အတင်းဆွဲပြီး ပစ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ရာပေါင်းများစွာသော ကျောင်းသူကျောင်းတွေထဲက လုံထိန်းအချူပ်ကားအတွင်း ရောက်ရှိခဲ့ရသူတွေဟာ အချူပ်ကားအတွင်းမှာ ထပ်မံသေဆုံးခဲ့ကြရပါတယ်။
အာဏာရူး လက်ပါးစေ လုံထိန်းတွေရဲ့အချူပ်ကားတွေ မောင်းထွက်သွားတဲ့အခါမှာ မီးသတ်ကားတွေ ချက်ချင်းဆိုသလို စောင့်ဆိုင်းရာက ၀င်ရောက်လာကြပြီး မီးသတ်ပိုက်များနဲ့ ပြည်လမ်းတလျှောက် သွေးစွန်းနေတဲ့ လမ်းမ၊ အင်းလျားကန်ဘောင်နဲ့ တံတားဖြူကို ရေပက်ဖြန်းပြီး ဆေးကြောသုတ်သင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့သွေးမြေကျခဲ့ရတဲ့ မတ်လ (၁၆) ရက်နေ့ညမှာဘဲ ရင်နာစဖွယ် ဆိုးရွားလွန်းတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို အာဏာရူးလက်ပါးစေတွေဟာ ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ည (၁၂) နာရီခန့်မှာ အနီရောင် ပစ်ကပ်ကား တစ်စီး အင်းလျားကန်ဘောင်မှာ ရပ်လိုက်ပါတယ်။ ကားပေါ်မှာ ပါလာသော လူသတ်ကောင် လုံထိန်းများဟာ ကျောင်းသူ မိန်းကလေး (၃) ယောက်ကို ကားပေါ်မှ ဒရွတ်တိုက် ဆွဲချပြီး ကန်ဘောင်ပေါ်မှာ ပစ်ချထားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ကျောင်းသူ မိန်းကလေး (၃) ယောက်ဟာ အောက်ပိုင်း တစ်ခုလုံး သွေးများနဲ့ မြင်မကောင်းအောင် ဖြစ်နေပါတယ်။ အသက်တော့ ရှိနေသေးတယ်။ သတိရ တစ်ချက် မရတစ်ချက်ဖြစ်ပြီး သေလုမြောပါးဖြစ်နေတဲ့ ကျောင်းသူ မိန်းကလေး (၃) ယောက်ကို တွေ့ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားအချို့ က အနီးဆုံး လဘက်ရည်ဆိုင်ထဲကို တိတ်တဆိတ် သယ်ခဲ့ကြပြီး နောက်နေ့မနက် မိုးလင်းချိန် နံနက် (၅) နာရီလောက်မှာ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကို ပို့ခဲ့ကြပါတယ်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာလည်း အခြားသော မတရားပြုကျင့်ခံရတဲ့ ကျောင်သူအရွယ် မိန်းကလေးများ ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့ တာဝန်ကျနေကြတဲ့ သူနာပြုဆရာမများက ပြောပြပါတယ်။ ကျောင်းသူ မိန်းကလေးတွေ အာဏာရူးလက်ပါးစေတွေရဲ့အုပ်စုလိုက် လူမဆန်စွာ မတရားပြုကျင့်ခံရတဲ့အတွက် သားအိမ်ကွဲပြီး ဆေးရုံအရောက်မှာ သေဆုံးသွားခဲ့ကြရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဒီလို မတလလ (၁၆) ရက်နေ့မှာ ရိုက်ပုတ်ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးပြီး လုံထိန်းအချူပ်ကားတွေနဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခံရတဲ့ ဆန္ဒပြကျောင်းသူတွေဟာ အာဏာရူးလက်ပါးစေ လူသတ်ကောင် လုံထိန်း မိစ္ဆာကောင်တွေရဲ့လူမဆန်သော ယုတ်မာမှုကို ခံခဲ့ကြရပါတယ်။
“ခင်ဗျားတို့ ကို စိန်ခေါ်တယ်”
ကျွန်မ … တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ
ရှိုက်ကြီးဖိုငယ် … အသွယ်သွယ်။
သပြေခက်ကျော် … ရေတွက်သော်
တစ်ကိုးရှစ်ရှစ် … တော်လှန်ခေတ်မှာ
တစ်တစ်ရစ်ရစ် … တစ်ဆယ့်ရှစ်။
အို ဘာကိုထောက် … ကြောက်ရမှာလဲ
ရဲရဲတောက်ပ … ရဲတောက်မဟာ
ကျွန်မ.. ကျွန်မ … လက်နက်မချ
ကျွန်မ … အပျိုမ.. ကျဆုံးရသည်
ကျွန်မ … ခုခံ မတွန်းလှန်နိုင်
လှုပ်မရ … ရုံးမရ
မရ … မရ … အို … မရတော့
ကျွန်မ … ရေတိမ်နစ်ခဲ့ရပြီ။
ကျွန်မနှုတ်ခမ်း … ဖက်ဆစ်နမ်းကြ
ကျွန်မရင်အုံ. … ဖက်ဆစ် ငုံကြ
ကျွန်မ … တွင်း … ဖက်ဆစ် …. ကြ
ဖက်ဆစ်မုဒိန်း … လုံထိန်း လုံထိန်း
နတ်စိမ်းပူးဝင် … အရှင်လတ်လတ်
ခေတ်သေနတ်နဲ့အငတ်မပြေ
ကျွန်မအပျိုရည် … ကိုသောက်
တစ်ယောက် နှစ်ယောက် သုံးလေးယောက်မက
ကျွန်မ မသေ … မျက်ရည်မကျ
ကျွန်မရေတိမ်နစ် … သားအိမ်ညစ်လည်း
ကျွန်မ မြတ်နိုးသည့် ဒီမိုကရေစီ။
ဟယ် … ဖက်ဆစ်အစိုးရ
ငါ့သွေးသားကို … နင်ဝါးမြိုသည်
နင့်ကို ငါ ဘယ်တော့မကျေ
ဟယ် … အစိုးရ
ငါ့အပျိုရည် … နင်ဖျက်ချွေသည်
ရာဇ၀င် မကျေ … မကျေ … မကျေ။
ဟေ့ … အစိုးရအမွေ
နောက်လိုက်ခွေးတပ် … လုံထိန်းတပ်တို့ 
သတ္တိရှိရင် လာစမ်းပါစေ …
သေနတ်တစ်ကမ်း … သွေးခင်းလမ်းမှာ
မြန်မာပန်းပွင့် … မုဒိန်းကျင့်ခံရ
နင် အစိုးရ. အပြုတ်ချမယ်
လုံးဝ … ငါတို့ ဒူးမထောက်
လုံးဝ … ငါတို့ ဒူးမထောက်။
(၁၉၈၈ခုနှစ် မတ်လအရေးအခင်းတွင် မဆလ လုံထိန်းတပ်တို့ ၏ ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံရပြီး၊ ထောင်တွင်းတွင် အဓမ္မမုဒိန်းကျင့်ခံခဲ့ရသော ရန်ုကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတစ်ဦး၏ ရင်တွင်းခံစားချက် ဖြစ်ပါတယ်)။
အာဏာရူးတို့ ရဲ့မတရားဖိနှပ်ချူပ်ချယ် ညဉ်းပမ်းသတ်ဖြတ်မှုများကို ရဲရဲဝန့် ဝန့်ဆန့် ကျင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်း ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ အသက်သွေးပေးဆပ်ခဲ့ကြရတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူအပေါင်းအား ဦးညွှတ်ဂုဏ်ပြု အလေးပြုအပ်ပါတယ်။
ကျောင်းသားကျောင်းသူအပေါင်းရဲ့သွေးနဲ့နီစွေးခဲ့ရတဲ့ အင်းလျားကန်ဘောင်က တံတားနီကို အာဏာရူးတွေ ပြုတ်ကျစေမယ့် ရဟန်းရှင်လူ ကျောင်းသားပြည်သူတွေရဲ့အောင်ပွဲနဲ့ အတူ ပြန်လည်ဖြူစင်စေရမယ်။
မတ်လ (၁၆) ရက်နေ့ ကို တံတားနီနေ့ ရဲ့သမိုင်းမှတ်တိုင်နဲ့ အတူ ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အောင်ပွဲကို မကြာခင်မှာ စိုက်ထူမယ်။
မြန်မာပြည်မှာ အာဏာရူးတွေမှန်သမျှကို ဆန့် ကျင်တော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေမယ့် ကျောင်းသားထုရဲ့တော်လှန်ရေးနဲ့ကျောင်းသားစိတ်ဓါတ်ဟာ အစဉ်ရှင်သန်နေမယ် ဟေ့။
This entry was posted in မြန်မာသတင်း, News and tagged စစ်အစိုးရ, တံတားနီနေ့, အာဏာရူးနေဝင်း, နေဝင်း, မြန်မာဘလော်ဂါ, Blogger Shwe Htoo, Myanmar, Myanmar Article, Myanmar Blogger, Myanmar Recent News, Obama Myanmar on March 18, 2013 by koshwehtoo.
← အူဝဲစကားနဲ့ပဲပြောမယ်.. မိတ္ထီလာ အရေးအခင်း ဆင်ခြင်ကြည့်ခြင်း →